नेपालमा कालो धान खेतीको संभावना कति ? | खुल्लापाना
खुल्ला पाना २०७७ फागुन २१, शुक्रबार (१ साल अघि) १०९ पटक पढिएको
कालो धान अर्थात ‘जी–६० ब्ल्याक राइस’ उच्च पोषणयुक्त धान हो ।
एक व्यक्तिले एक दिनमा १५ ग्रामका दरले अन्य चामलमा मिसाएर खाएमा क्यान्सर, अल्जाइमर्स, मधुमेह र ब्लड प्रेसरजस्ता रोगविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता कालो धानमा रहेको कृषि विज्ञहरू बताउछन् । अन्य चामलजस्तै गरी सेवन गरेमा उच्च पोषण तत्वका कारण कालो चामलको भात पचाउन सकिँदैन ।
पकाउनुअघि दुई घन्टा भिजाएरमात्रै पकाउनुपर्ने र भिजाएको पानीलाई सर्वतको रुपमा सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकीको भनाई छ ।
१.नेपालमा कालो धानको प्रवेश :
नेपालको जमिनमा यो धानले प्रवेश गरेको चार पाँच वर्ष मात्र भएको छ। स्थानीय जात सरह नै फल्ने यो धान नेपालमा स्थानीयकरण भइसकेको छ।एसआरआई पद्धतिबाट धान रोप्ने हो भने झन्डै अरू धानभन्दा दोब्बर उत्पादन हुन्छ। यो धान अरयाज स्याटीभा जातिअन्तर्गत ज्यापोनिक समूहमा पर्छ।
यो प्रजातिअन्तर्गत विभिन्न २० उपप्रजातिहरू पाइन्छ :
यो चामल एसियन उत्पादन हो। किनकि रेडियो कार्बन डेटिङबाट प्रमाणित भएअनुसार यो ब्ल्याक राइस आजभन्दा आठ हजार दुई सयदेखि १३ हजार वर्षपहिलो चीनमा खेती गरिएको भन्ने भनाइ छ।तर आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छैन। मध्यनियोलियिक समयतिर नै एसिया, युरोपलगायतका महाद्वीपमा खेती गरिएको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ।
चीनको याङ्त्से नदी तथा पर्लस नदी उपत्यकामा पाँच हजार बीसीतिर खेती भएको र दक्षिणपूर्वी एसिया मा चार हजार तीन सय ५० बीसीतिर विस्तार भएको भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । पछि भियतनाम र भारतको बेलान र गंगा नदी आसपासमा खेती भएको पाइन्छ।
यो चामल संसारभर उत्पादन भएको छ । जापान, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत थुप्रै देशमाभएको खेती भई आएको छ भने चीनमा ६७ प्रतिशत खेती हुने गरेको छ।यो धान अत्यन्त महँगो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार प्रतिकिलो ८ देखि २५ डलरमा खरिद बिक्रीभइरहेको छ।
२ . कसरी खाने ?
३.यो चामलमा के – के पोषक तत्वहरु पाइन्छ त?
त्यस्तै कार्बोहाईड्रेड ७६.१७ ग्रा, तामा ०.२७७ मि ग्रा, सिस्टाइन ०.०९१ ग्रा., शक्ति ३६२ किलोक्यालोरी, मोनोस्याचुरेटेड फ्याट्टी एसिड ०.९७१ ग्रा., पोलिस्याचुरेटेड फ्याट्टी एसिड ०.९५९ ग्रा, स्याचुरेटेड फ्याट्टी एसिड ०.५३६ ग्रा।, खाद्य रेशा ३.४ ग्रा, डायटरी फोलेट इक्वीभ्यालेन्ट २० माइक्रोग्राम पाइन्छ।
खाद्य फोलेट २० माइक्रोग्राम, ल्गुटामिक एसिड १.५२८ ग्राम, ल्गाइसाइन ०.३६९ ग्राम, हिस्टीडाइन ०.१९० ग्राम, आइरन १.८० मिलिग्राम र आइसोल्युसाइन ०.३१८ ग्राम पाइन्छ।
एक सय केजी चामलमा ल्युसाइन ०.६२० ग्राम, लाइसिन ०.२८६ ग्राम, म्याग्नेसियम १४३ मिलिग्राम, म्यान्गानिज ३.७४३ मिलिग्राम, मिथियोनाइन ०.१६९ ग्राम, नियासिन ४.३०८ मिलिग्राम, प्यान्टोथेनिक एसिड १.४९३ मिलिग्राम, फेनाइलअलानाइन ०.३८७ ग्राम, फोसफोरस २६४ मिलिग्राम, पोटासियम २६८ मिलिग्राम, प्रोलाइन ०.३५२ ग्राम पाइन्छ।
२२ सय मिटर उचाइसम्म यो धान फल्छ, धुले व्याडमा विउ लगाउन सकिन्छ। यो हाम्रो देशैभर उत्पादन हुन सक्छ । यो धान विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य कृषि वाली हुन सक्छ ।